Bahdilka Wefdiga Raysalwasaaraha Soomaaliya ee Garoonka Joma Kenyatta, Nairobi - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa maalintii shalay ka duuley garoonka diyaaradaha ee Muqdisho wefdi la sheegay in uu hoggaaminaayey Raysalwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmarke, wefdiga waxaa kamid ahaa, Wasiiro, Xildhibaano iyo shaqaale ka tirsan xafiiska Raysalwasaaraha.
Wefdiga ayaa ujeedkoodu yahay in ay tagaan dalka Turkiga magaalada Istanbul oo uu dhawaan ka furmayo shir loogu wal-qalayo nidaamka doorasho ee Soomaaliya isla markaana caalamka lagu weydiisanayo in ay dhaqaale ku bixiyaan.
Wefdiga ayey la soo deristey nasiib xumo maadaama aysan helin diyaarad toos uga qaada Muqdisho oo geysa Istanbul sida wixii ka horeeyey weerarkii diyaaradda Daallo Airlines, waxaana ay ku khasabanaadeen sida ay sameyn jireen waayadii hore in ay dhaxniin (Transit) ku noqdaan dal kale kaas oo noqdey Kenya.
Maxaa ka qabsadey Joma Kenyatta Airport
Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ahaa wefdiga ayaa idaacada VOA u sheegey in la bahdiley wefdigii Raysalwasaaraha, markii hore loo oggolaadey qaybta Marti-Sharafta (VIP), kadib laga daba yimid Baasabooradii laga wada qaadey. Muddo afar saacadood ah kadib la sii daayey Raysalwasaaraha iyo xayn wasiiro ah, laakiin Xildhibaanada kale ee aan haysan Tigidhadii diyaaradda ay Istanbul u raaci lahaayeen lala harey, sida uu sheegay Xildhibaanku, waxaana loo diidey in ay magaalada galaan ama helaan Fiisaha Transit-ka wuxuu sheegtey bahdil kii u xumaa, wuxuu sheegay in ay Baarlamanka horgeyn doonaan maadaama Kenya tahay dal ay xiriir leeyihiin Kiinyaatiguna badana ay ka shaqeeyaan Soomaaliya.
Saraakiisha Amaanka ee Dowlada Kenya ayaa sheegay inay joojiyeen Wafdiga uu hogaaminayey Raysalwasaare Sharmarke maadaama diyaaradii Muqdisho ka keentay aan lagu soo baarin magaalada Wajeer balse toos uga soo degtay Nairobi. Diyaaradaha Soomaaliya ka yimaadana ay khasab tahay inay dhamaantood soo maraan baaritaanka magaalada Wajeer.
Waxaase la yaab ah in Wasaarada Arrimaha Dibada ee Kenya ay Kolonyo gaadiid ah usoo dirtay Wafdiga Sharmarke, balse gaadiidkaasi ayaa waxaa dib u celiyey Saraakiisha socdaalka ee maamulka Airportka Jomo Kenyatta.
Waxayna maamulka Socdaalka ee Madaarka Nairobi sheegeen inay doonayeen in Raysalwasaaraha Soomaaliya iyo wafdigiisa dib ugu celiyaan magaalada Muqdisho, balse diyaaradii keentay ay si lama filaan ah ugu dhooftay magaalada Hargeysa. Taas oo ku khasabtay in wafdiga ay seexdaan qeybta VIP-da Jomo Kenyatta Airport.
Law (Ruug) isku dhufte isagaa u dhutiya
Garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde waxaa dib u dhisey Turkiga, Diyaarad ka shaqeysa oo caalamka oo dhan tagta waxaa keenay Turkiga, qalabka wax lagu ilaalinaayo waxaa keenay Turkiga? Waxaa qalabka ku shaqeeya oo ilaalo garoonka ka ah hay’adda nabadsugidda ee NISA.
Weerarkii Daallo waxaa fududeeyey xubno ka tirsan NISA!, Waxaa dhaafiyey Kunbuyuutarka wax lagu qarxiyey waa sirdoonka Dowladda, sida laga soo xiganayo ilo lagu kalsoon yahay ninka Bomka keenay ee ka tirsanaa NISA waxaa galbinaayey oo meelkasta la socdey sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Booliska oo si weyn loo yaqaan!, waxaa Koontooyinkooda xisaabta laga heley labada qof ee sida weyn u soo abaabuley weerarkan midkiiba lacag ka badan $100,000 (Boqol kun) oo dollarka Maraykanka ah, xagee lacagtaasi ka timid?.
Arrimahaan oo dhan waxay kalifeen in Turkigu joojiyo diyaaradiisi weerarka lala maagaanaa?, isla markaana dhamaan musaafiriintii Soomaaliyeed ee ay ku jiraan Raysalwasaaraha iyo wefdigiisi ka dhigtey agoomo.
Mooshinka Baarlamaanka yaal
Xildhibaanada Baarlamaanka waxaa loo sheegay in la baarayo oo xitaa gabadha xildhibaanada ah Rujimeetada laga siibayo waxa ku jirana la eegayo! Sida waxaa sheegtey Xildhibaan Khadiija Diiriye oo kamid ah Baarlamaanka Federaalka.
Xildhibaanada Baarlamaanku waa ogyihiin in ay caadi tahay in qofkasta oo garoon ka duulayo la baaro, kadibna ama VIP gelaayo ama qaybta dadweynaha, waxayse doodu ku salaysan tahay yaa ku fashilmey amnigii? yaa masuulka ah waxa dhacay? Xildhibaano badan ayaa qaba in ay ku fashilmeen ciddii loo xilsaarey oo iyagagiiba ay al-Shabaab la shaqeynayaan, haddana ay diidan yihiin in lala xiaabtamo halka ay gabdhaha Xildhibaanada ah calooshooda baarayaan, halka Shacabkiina oo aan wax danbi ah geysana la marinayo Baaritaan lala yaabay.
Meelo badan oo caalamka kamid ah ayey ka dhacaan falal argagaxiso, balse waxay dowladaha horumaray iyo kuwa kale ee dunnida sadexaad markii ay xal u raadinayaan ay eegaan halka laga soo galay!
Hadii falka ay gesyteen dad shacab ah oo dul-duleel ka helay baaritaanada hay’adaha amaniga, waxaa xoogga la saaraa in la daboolo dul-duleeladaasi, balse hadii falkan uu ka yimid isla hay’adaha amaanka waxaa lama huraan ah in baaritaan dheer iyo isbedal lagu sameeyo hay’adaha amaanka qaabilsan ee aan lagu dul rafan shacabka aan danbiga geysan.
Waxaana mudan in dhaqaalaha badan iyo dadaal dheer la geliyo sidii loo heli lahaa Hay’adaha Sirdoonka (NISA) iyo amaanka oo aqoon uleh hawsha ay hayaan, isla markaana la hubiyo dadka ka shaqeenaya inay yihiin kuwo daacad u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Isku soo xoori, Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu dhibane u noqdey laamihiisa amniga, waxaana ku kalifey in uu ka soo dhex qayliyo garoonka Jooma Kenyatta waa Sirdoonkii gudbiyey Laptopkii Daallo Airlines lagu dhex-qarxiyey, taas oo wejigii iyo kalsoonidiiba ka qaadey garoonkiisi caalamiga ahaa.
Dhegayso waraysiga VOA la yeelatey Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac